WebHosting – Support Desk
WebHosting ဆိုတာ ဘာလိုserver အမျိုးအစားလဲ?
WebHosting ဆိုသည်မှာ Shared Server အမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။ cPanel ကိုအသုံးပြုထားပြီး ready to use service တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ Website, Email, FTP, WordPress များလည်းအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ optional service အဖြစ် Static IP address ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
ဘယ်လို website မျိုးကို WebHosting မှာအသုံးပြုရမလဲ?
Information website, Small blogs site, small and medium company information site များအတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Server နဲ့ domain ကို ဘယ်လိုချိတ်ဆက်ရမလဲ?
ပထမဦးစွာ cPanel server အား Login ဝင်၍ Add on domain ကိုနှိပ်ပါ။ ပြီးလျှင် မိမိ အသုံးပြုချင် သော domain name အားထည့်သွင်းပါ။ Add Domain အားနှိပ်၍ Domain အသစ်ချိတ်ဆက်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
Website တင်ပြီးပြီ internet က ခေါ်လို့မရဘူး ဘာလုပ်ရမလဲ?
Domain expired or suspend ဖြစ်လားစစ်ပါ။ DNS record တွင် server IP မှန်/မမှန် စစ်ဆေးပါ။ Project files များ သက်ဆိုင်ရာ domain folder ထဲတွင်ရှိလား စစ်ပါ။ Website နှင် database ချိတ်ဆက်ထားလားစစ်ပါ။ အထက်ပါအချက်လက်များ စစ်ပြီး၍မရလျှင် Support team အားဆက်သွယ်ပေးပါ။
SSL install လုပ်ပြီးပြီ https မရသေးဘူး။
ပထမဦးစွာ https://domain.com ဖြင့် access လုပ်ပါ။ SSL ရလျှင် http to https ကို redirect လုပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ .htaccess file အားအသုံးပြု၍ redirect ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
Email ပို့လိုရတယ် လက်ခံလို့မရဘူး ဘာစစ်ရမလဲ?
DNS တွင် MX record မှန်/မမှန် စစ်ဆေးပေးပါ။ Outlook အသုံးပြုလျှင် incoming and outgoing mail server မှန်/မမှန် စစ်ဆေးပေးပါ။ Username and password မှန်ကန်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးပေးပါ။ အထက်ပါ အချက်များစစ်ဆေးပြီး email ပို၍မရလျှင် Support team အားဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
FTP account ကို ဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲ?
FileZilla software အားမိမိ PC တွင် install လုပ်၍ server သို့ File or folder များကို FTP မှ download/upload ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ Folder တင်လျှင် Zip ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
WebHosting server ကို ရုံး network နဲ့ဝင်မရတော့ဘူး။
ပထမဦးစွာ network public IP အားစစ်ပါ။ မိမိ PC မှ Command prompt တွင် tracert -d serverIP, pathping -n serverIP စသည်များ ပြုလုပ်၍ Screenshot or photo နှင်တကွ support team (support@gmoace.com) သို့ဆက်သွယ်ပေးပို့ပါ။